မြန်မာပလာဇာရှေ့တွင် လမ်းဖြတ်ကူးသူ မလေးရှားနိုင်ငံသားတစ်ဦး ယာဉ်တိုက်ခံရပြီး သေဆုံး၊ ယာဉ်? - Yangon Media Group
မြန်မာပလာဇာရှေ့တွင် လမ်းဖြတ်ကူးသူ မလေးရှားနိုင်ငံသားတစ်ဦး ယာဉ်တိုက်ခံရပြီး သေဆုံး၊ ယာဉ်?
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃- မြန်မာပလာဇာရှေ့တွင် လမ်း ဖြတ်ကူးသူ မလေးရှားနိုင်ငံသားတစ်ဦး ယာဉ်တိုက်ခံရမှု ကြောင့် သေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ် ခန့်တွင် ဗဟန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအတိုင်း တောင်မှမြောက်သို့ ယာဉ်မောင်း(စုံစမ်းဆဲ) မောင်းနှင် လာသော ဝက်ဂွန်အမျိုးအစား အဖြူရောင်အငှားယာဉ် သည် မြန်မာပလာဇာရှေ့အရောက် အရှေ့မှ အနောက်သို့ လမ်းကူးသူ မလေးရှားနိုင်ငံသား Mr.Vinothku mar Mari Muthu (၃၃)နှစ်အား ဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့ပြီး ယာဉ် မောင်းမှာ အခင်းဖြစ်နေရာမှ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ ကြောင်း အမှတ်(၂)ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးထံမှ သိရ သည်။
ယာဉ်တိုက်ခံရသူ မလေးရှားနိုင်ငံသားတွင် ဦးခေါင်း ခွံကွဲဒဏ်ရာ၊ နဖူးချိုင့်ဝင်၊ နှာခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာ၊ ယာခါးစောင်းပွန်းစုတ်၊ ယာလက်ဖျံ/ယာလက်ကောက် ဝတ်ပွန်းစုတ်၊ ဝဲဒူးဖူးရောင်၊ ယာခြေသလုံးပွန်းစုတ်ဒဏ်ရာ များရရှိပြီး အခင်းဖြစ်နေရာတွင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အမှတ် (၂) ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးထံမှ သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှတ် (၇)ယာဉ်ထိန်းရဲဒုတပ် ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ ယာဉ်ထိန်းရဲအရာရှိတစ်ဦးက ”အမှုစစ်က လိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်။ ကားနံပါတ်လည်း ရထားတယ်။ ကားနံပါတ်ရထားတော့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိရမယ်။ အဲဒါမှ ဘယ်သူမောင်းလဲဆိုတာ သိရမယ်။ ကျူးလွန်သူကိုတော့ ဖမ်းမမိသေးပါဘူး။ သေဆုံးသူ မလေး ရှားနိုင်ငံသားရဲ့ နေရပ်လိပ်စာမသိရသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ မှာ ပတ်စ်ပို့တို့၊ ဗီဇာနံပါတ်တို့ရှိတယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေး သို့ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က ပြောသည်။
ယင်းယာဉ်တိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်း မှ ယာဉ်(ပ) ၄/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃ဝ၄-က/ ၂၇၉/၂ဝ၂ဖြင့် ယာဉ်မောင်း (စုံစမ်းဆဲ)ကို အမှုဖွင့်အရေး ယူထားသည်။
အိုဇေးလ်ဆက်ရှိနိုင်သော်လည်း ဆန်းချက်ဇ်ကိုဆုံးရှုံးရဖွယ်ရှိကြောင်း နည်းပြဝင်းဂါးဝန်ခံ
ချန်ပီယံဆုအတွက် မန်စီးတီးကို ဆက်လက် တွန်းအားပေးမည်ဟု ရှာကွီရီပြောဆို၊ အဝေးကွင်းတွင် ရင်ဆိ